कवि सोम निरौलाको सिसिफस लोकार्पण - Nayabulanda.com
कवि सोम निरौलाको सिसिफस लोकार्पण
नयाँ बुलन्द २ कार्तिक २०७७, आईतवार ०८:४४ 132 पटक हेरिएको
इलाम : इलामका कवि सोम निरौलाको कवितासङ्ग्रहको विमोचन भएको छ । प्रविधिमार्फत् कार्यक्रम आयोजना गरी कार्तिक १ गते शनिबार कवि सोम निरौलाको नवप्रकाशित कृति सिसिफसको विमोचन गरिएको हो ।
कोकगोष्ठी, प्रतिभा निकुञ्ज र छन्द-चौतारी तीन संस्थाको सहकार्यमा आयोजित ९७ औँ कोकगोष्ठीको अवसरमा यस कृतिको लोकार्पण गरिएको हो । ४९ ओटा छन्द-कविताहरू समेटिएको यस कविताको विमोचन कार्यक्रमको अध्यक्षता कोकगोष्ठीका अध्यक्ष छन्दसारथि एवं आधुनिक आशुकवि रमेश खकुरेलले गरेका थिए ।
कोकगोष्ठीका संरक्षक प्रा.डा. माधवप्रसाद पोखरेल, कवि भुवनहरि सिग्देल, कवि कोषराज न्यौपाने, कवि प्रह्लाद पोखरेल, प्रतिभा निकुञ्जका अध्यक्ष होम सुवेदी लगायत कविहरूको उपस्थिति रहेको थियो । उपस्थित सबैका हातबाट पुस्तकको लोकार्पण भएपछि कवितासङ्ग्रहको समीक्षात्मक टिप्पणी झापाका साहित्यकार होम सुवेदीले प्रस्तुत गरे ।
कवि प्रह्लाद पोखरेल सञ्चालक रहेको उक्त कार्यक्रममा कवि भुवनहरि सिग्देल, कवि कोषराज न्यौपाने, प्राध्यापक डा. माधवप्रसाद पोखरेल लगायतले आफ्नो मन्तव्य राखेका थिए । कविताभित्र सूक्तिमयता रहेको, र छन्दकवितामा बिम्बको प्रयोग हुँदैन भन्नेहरूका लागि सिसिफस एउटा दरिलो जवाफ भएको धारणा प्रायः वक्ताहरूले प्रस्तुत गरेका थिए ।
गणित विषयका अध्यापक सोम निरौला छन्दमा कविता लेख्ने समकालीन कविहरूमध्ये उत्कृष्ट कवि हुन् ।
सामाजिक सञ्जालमा छन्द-चौतारीनामक समूह सञ्चालन गरी नेपाली छन्द-कविताको जागरणमा सक्रियता देखाइरहेका सोम निरौलाको यो पहिलो कृति हो भने निकट भविष्यमा नै अरु कृतिको प्रकाशन गर्ने तयारीमा रहेको पनि उनले जानकारी दिएका थिए ।